Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 19, 2021 | web ပေါ်မှာ
2021 အလုပ်သင်ဆုကြေးငွေ: ၎င်း၏ပမာဏ
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း၌အလုပ်သင်သက်တမ်းသည်နှစ်လဆက်တိုက်ကျော်လျှင်၊ သို့မဟုတ်တူညီသောကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်နှစ်အတွင်းကာလသည်နှစ်လဆက်တိုက်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်သင်သည်အပိုဆုကြေးကိုလက်ခံရရှိသည်။ ပမာဏကိုဌာနခွဲ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ တိုးချဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောတူညီချက် (C. educ ။ , အနုပညာ။ အယ်လ် 124-6) ။
သက်ဆိုင်သောသဘောတူညီချက်မရှိခြင်းတွင်အပိုဆုကြေးပမာဏသည်နာရီ၏မျက်နှာကျက်မှု၏ ၁၅% ဖြစ်သည် လူမှုဖူလုံရေး.
အဆိုပါလျော်ကြေး အလုပ်သင်လစဉ်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပထမလ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကမှရမည်ဖြစ်သည် စင်.
2021 အလုပ်သင်ဆုကြေးငွေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ထို့ကြောင့်လူမှုရေးလုံခြုံမှု 2021 ၏အလုပ်ချိန်နာရီမျက်နှာကျက်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လူမှုဖူလုံရေးမျက်နှာကြက်၏မတူညီသောတန်ဖိုးများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ လူမှုလုံခြုံရေးမျက်နှာကျက် 2021
လူမှုဖူလုံရေးအတွက်အလုပ်ချိန်နာရီမျက်နှာကျက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၂၆ ယူရိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်သင်တစ်နာရီအနိမ့်ဆုံးဆုကြေးသည် ၂၀၂၁ တွင်ယူရို ၃.၉၀ ဖြစ်သည်။
2021 အလုပ်သင်ဆုကြေးငွေ ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
အောက်ပါတစ် ဦး လုပ်အားခအလှဆင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့နမူနာစာ
အောင်မြင်သောအလုပ်ရှာဖွေရန်လျှို့ဝှက်ချက် ၁၀ ခု